Degmada Siouxland Health Health waxay soo sheegaysaa hal dhimasho oo dheeri ah oo ka dhacda Gobolka | KWIT
Waxaa jiray 293 kiis oo cusub oo wadarta ah oo keliya 10,400. Waxaa jiray laba iyo toban kiis oo cusub oo ka dhacay Gobolka Woodbury. Lambarro cusub oo ka socda Degmada Dakota lama heli karo sababa la xiriira cilado farsamo awgeed.
Labada isbitaal ee Magaalada Sioux City ayaa sii daayay bayaanno la xiriira daryeelka bukaanka inta lagu jiro cudurka faafa.
Ururka 'UnityPoint-Health' wuxuu bukaannada ugu wareejinayaa tas-hiilaad kale si looga caawiyo fududeynta cadaadiska xubnaha kooxda safka hore.
Dhanka kale, MercyOne waxay sheegtey inaysan awoodin isla markaana aysan wareejinaynin bukaannada. Isbitaalka wuxuu caawimaad dheeri ah ka helayaa shaqaalaha banaanka iyo qalabka.
Labada bixiye caafimaad waxay daryeelayaan 95 bukaan oo COVID-19 ah.
Guddoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds ayaa maalintii ku sugnaa Washington, wuxuuna la kulmay madaxweyne Donald Trump si uu ugala hadlo jawaabta gobolka ee ku aaddan dillaaca dhirta hilibka. Waxay jeceshahay inay aragto hawlgalada oo dib u bilawday toddobaadle illaa 10 maalmood.
Suuqyada Beeraleyda Magaalada Sioux ayaa la furay Arbacadii in kasta oo ay sii kordhayaan tirada kiisaska COVID-19.
Dad lagu qiyaasey 300 oo qof ayaa yimid, si dhaqso leh u toogtay oo uga tegey.
Shaqaalaha suuqa beeraleyda ayaa sheegaya in ay dhigaan qawaaniin amni sida kuwa baayacmushtariyaasha kala fogaynta iyo dhigida xarummaha fayadhowrka gacmaha suuqa oo dhan. Waxay sidoo kale si aad ah ugu talinayaan in dukaameeyayaashu xirtaan maaskaro.